"မန္တလေးမှာ AA အဖွဲ့ဝင် ၄ ဦးကို ဖောက်ခွဲရေး ပစ္စည်းများနဲ့ အတူ ဖမ်းမိ" - BaHuThuTaGabar
မန္တလေးမြို့ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် မြို့သစ် (၅) ရပ်ကွက်ရှိနေအိမ်တစ်ခုတွင် အမျိုးသား (၄) ဦးနှင့်အတူ ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးရာတွင် အသုံးပြုသော ပစ္စည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ပစ္စည်းများကို စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းအချိန်က ဖမ်းဆီးရမိထားကြောင်း သိရသည်။
သတင်းအရ သက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ က သက်သေများနှင့်အတူ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မြို့သစ်(၅)ရပ်ကွက်၊ လမ်း ၇၀၊ ဒဿနလမ်းရှိ နေအိမ်တစ်ခုသို့ ဝင်ရောက်ရှာဖွေရာ အောင်လင်းထက် ၊ ဦးမြတ်ခိုင် ၊ ချမ်းငြိမ်း တို့အား တွေ့ရှိသည့်အတွက် စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည် ။
ထို့နောက် အဆိုပါ နေအိမ်အပေါ်ထပ် အခန်းအတွင်းမှ THLIRAYA XT-ITTE. Satellite Phone (အသစ်) အလုံး (၄၀)၊ မှန်ပြောင်း (BAIGISH) made in RUSSIA (၃၀) ခု၊ GARMIN (GPS+GLONASS) (၂၅)လုံး၊ ယမ်းတုံးဟုယူဆရသော အထုပ်(၂၈)ထုပ်၊ ဒီတိုနီတာ ၁၀၀ ထုပ်ပါ (၁၀) ခု၊ ဖယောင်းချောင်း (၃၅) ချောင်း၊ စက္ကူဖြူ ၁၅ လိပ်ပါ (၃)ထုပ်၊ ယမ်းဖြူဟုယူဆရသော (ဆာလာအိတ်ဖြင့်ထည့်လျက်) ၅ အိတ်နှင့် စက္ကူညို (၁) ထုပ်တို့ကို တွေ့ရှိ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။
အသေးစိတ် စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေစဉ် ဖိုးကျော် (၂၂)နှစ် ရောက်ရှိလာသဖြင့် ဖမ်းဆီးထားခဲ့ကြောင်း မှုခင်းမှတ်တမ်းများအရ သိရသည် ။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ မှ ဒုတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီး ကိုကိုလွင်၊ မန္တလေးခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဒုရဲမှူးကြီး စိုင်းလှထူး ၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ မြို့နယ်ရဲမှူး နှင့် ဒုမြို့နယ်မှူး တို့အား ဆက်သွယ်မေးမြန်းသော်လည်း ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်း မပြုခဲ့ပေ ။
“AA တပ်ဖွဲ့ကလို့ အတည်ပြုပါတယ်။ ခုသူတို့ကို အကြမ်းဖက် ဥပဒေနဲ့ အမှုဖွင့်ဖို့ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။´´ ဟု ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ ယာယီမြို့နယ်ရဲမှူး ရဲမှူး ဇော်ဝင်းနိုင် က ပြောသည် ။
မန်တလေးမွို့ ခမျြးမွသာစညျမွို့နယျ မွို့သဈ (၅) ရပျကှကျရှိနအေိမျတဈခုတှငျ အမြိုးသား (၄) ဦးနှငျ့အတူ ဖောကျခှဲဖကျြဆီးရာတှငျ အသုံးပွုသော ပစ်စညျးမြားနှငျ့ ဆကျသှယျရေး ပစ်စညျးမြားကို စကျတငျဘာလ ၁၀ ရကျနေ့ နံနကျပိုငျးအခြိနျက ဖမျးဆီးရမိထားကွောငျး သိရသညျ။
သတငျးအရ သကျဆိုငျရာရဲတပျဖှဲ့ က သကျသမြေားနှငျ့အတူ ခမျြးမွသာစညျမွို့နယျ၊ မွို့သဈ(၅)ရပျကှကျ၊ လမျး ၇၀၊ ဒဿနလမျးရှိ နအေိမျတဈခုသို့ ဝငျရောကျရှာဖှရော အောငျလငျးထကျ ၊ ဦးမွတျခိုငျ ၊ ခမျြးငွိမျး တို့အား တှရှေိ့သညျ့အတှကျ စဈဆေးမှုမြားပွုလုပျခဲ့သညျ ။
ထို့နောကျ အဆိုပါ နအေိမျအပျေါထပျ အခနျးအတှငျးမှ THLIRAYA XT-ITTE. Satellite Phone (အသဈ) အလုံး (၄၀)၊ မှနျပွောငျး (BAIGISH) made in RUSSIA (၃၀) ခု၊ GARMIN (GPS+GLONASS) (၂၅)လုံး၊ ယမျးတုံးဟုယူဆရသော အထုပျ(၂၈)ထုပျ၊ ဒီတိုနီတာ ၁၀၀ ထုပျပါ (၁၀) ခု၊ ဖယောငျးခြောငျး (၃၅) ခြောငျး၊ စက်ကူဖွူ ၁၅ လိပျပါ (၃)ထုပျ၊ ယမျးဖွူဟုယူဆရသော (ဆာလာအိတျဖွငျ့ထညျ့လကျြ) ၅ အိတျနှငျ့ စက်ကူညို (၁) ထုပျတို့ကို တှရှေိ့ သိမျးဆညျးရမိခဲ့သညျ။
အသေးစိတျ စဈဆေးမှုမြား ပွုလုပျနစေဉျ ဖိုးကြျော (၂၂)နှဈ ရောကျရှိလာသဖွငျ့ ဖမျးဆီးထားခဲ့ကွောငျး မှုခငျးမှတျတမျးမြားအရ သိရသညျ ။
အဆိုပါဖွဈစဉျနှငျ့ ပတျသကျ၍ မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး ရဲတပျဖှဲ့ မှ ဒုတိုငျးရဲတပျဖှဲ့မှူး ရဲမှူးကွီး ကိုကိုလှငျ၊ မန်တလေးခရိုငျ ရဲတပျဖှဲ့မှူး ဒုရဲမှူးကွီး စိုငျးလှထူး ၊ ခမျြးမွသာစညျမွို့နယျ ရဲတပျဖှဲ့ မွို့နယျရဲမှူး နှငျ့ ဒုမွို့နယျမှူး တို့အား ဆကျသှယျမေးမွနျးသျောလညျး ပွနျလညျဖွကွေားခွငျး မပွုခဲ့ပေ ။
“AA တပျဖှဲ့ကလို့ အတညျပွုပါတယျ။ ခုသူတို့ကို အကွမျးဖကျ ဥပဒနေဲ့ အမှုဖှငျ့ဖို့ ဆောငျရှကျနပေါတယျ။´´ ဟု ခမျြးမွသာစညျမွို့နယျ ရဲတပျဖှဲ့ ယာယီမွို့နယျရဲမှူး ရဲမှူး ဇျောဝငျးနိုငျ က ပွောသညျ ။
“ဗစ်တိုးရီးယားလေး အတွက် ဆရာမနှင်းနုထံသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ”